रक स्टार अभय सुब्बासंगको ताजा एक्सक्लुसिव अन्तरबार्ता | onlineharpal.com
रक स्टार अभय सुब्बासंगको ताजा एक्सक्लुसिव अन्तरबार्ता
on: २९ चैत्र २०७३, मंगलवार ०९:५२ In: bignews1, अन्तर्वाता
नेपालको एक सांगीतिक अकसकी चर्चित गायिका अथबा नेपाली रकस्टार उपनामले चिर परिचित नाम हो अभय सुब्बा जस्ले जति गीतहरु गाएकी छिन सबै युवा पुस्ताको लागि राम्रा छन् उत्कृष्ट छन। हामी सबैलाई थाहा छ उहाँको आफ्नै चर्चित अभय एण्ड द स्टिम इञ्जिन्स ब्याण्ड छ। ब्याण्डको हिसाबले हेर्नेहो भने उहा नेपालको एक सर्जक नै मानिन्छ।
उहाँले देश विदेश गरि आफ्नो हजारौ हजार स्टेज प्रस्तुतिहरु दिईसक्नु भएको छ। उहाँ हरेक स्टेजमा सुन्दर र कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्नु हुन्छ। अभय सुब्बा नेपाली युवा पुस्ताका महिलाहरुका निम्ति एक उत्प्रेणाको श्रोत नै मानिन्छ। आउनुहोस हाम्रो अनलाइन हरपल डटकमको सम्बादाताले उहाँसंग गरेको ताजा कुरा कानी हेरौ।
-हजुर आराम नै छु।
तपाइँलाइ हाम्रो अनलाइन हरपल डटकममा हार्दिक स्वागत छ।
बास्तबमा तपाइको म्युजिक क्षेत्रमा निकै चर्चा चल्ने गर्छ अथवा अभय सुब्बा भने पछि नेपालको एउटा रकस्टार नै भनेर चिनिनु हुन्छ यहाँ आफुलाई चै कस्तो लागि राखेको छ ?
– मलाइ चै कस्तो लाग्छ भने रकस्टार भनेको इट्स बिग अनर मलाइ एउटा अनर नै देको हो नेपालले त्यो बाहेक चै मैले म्युजिक गर्न पाई राखेको छु। हाम्रो ब्याण्डको म्युजिकहरु सुनिदिनु भाछ। हामीलाई कन्सर्टहरुमा बोलाइ दिनु भाछ यो कुरा हुनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। त्यसमा म धेरै ग्रेटफुल र आभारी छु।
तपाइको गीतसंगीतहरु बढी रक स्टायलको छ तपाई स्टेजमा आउदा अलि बढी पश्चिमको शैली झल्किने जनमानसको मानस पटलमा छाउने गरेको छ तर यो नेपालमा चै अलि बढी रुचाइएन कसरी स्ट्रगल गरि रहनु भाछ ?
-रुचाउने मान्छेहरु कति छन् के छन् त्यो हामीलाई थाहा हुदैन हामी म्युजिक गरिरहन्छौ हामीले पन्धौ बर्षसम्म यहाँ बसेर ब्याण्ड गरि रहेका छौ भने मानिसले नारुचाईकनत तेत्रो बर्ष त बाँच्न सकिन्दै न होला जस्तो लाग्छ मलाइ रुचाकै हो।
अहिले टेक्नोलोजीको कारणले युटुबबाट एक क्लिकमा संसारको म्युजिकहरु हेर्न पाइन्छ। त्यसमा हामी पनि इन्फ्लुइन्स भएर वएसट्रन भाकामा गीत गायो भने इट्स वोर्ल्ड कल्चर हामीले नेपाली फोक र पश्चिमी गीतको फ्युजन भन्न मिल्दैन तर हाइब्रेड जस्तो गरेर गीत बनाको छौं अब त्योहरु रिसर्च गर्दैन हाम्रो नेपालीले।
ठ्याकै मैले तपाइलाइ भन्न खोजेको कुरा चै स्ट्रगल गरिरहनु भाछ मेहनत गरि रहनु भाछ अघि भन्नु भयो वएसट्रन र नेपाली कल्चरलाइ मिक्सब गरेर चै नयाँ रुप दिने भनौन नयाँ इन्भेन्सन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण बिसयमा लागि रहनु भाछ यो क्षेत्रमा यसरी लागि राख्दा तपाइलाइ कतिको स्ट्रगल गर्नु परेको छ भन्ने हो ?
-यस्तो हुदो रैछ जब स्ट्रगल हुन्छ त्यति बेला चै थाहा हुँदो रैछ कति स्ट्रगल गर्नु पर्यो कति दुख गर्नु पर्यो मान्छेले किन नसुन्देको होला किन हेर्न नआको होला के भाको होला भन्ने तर अहिलेको समय आउँदा मान्छे आउँछ हेर्छ त्यति बेला त्यो जुन चै स्ट्रगल गरेको दुख पाएको कुरा चै थाहै हुदैन रहेछ।
तपाइले यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कुन गीतबाट सुरु गर्नु भो ?
– सुरुमा सक्दिन अब म भन्नु पर्यो।
यो चै कतिको लोकप्रिय भो जस्तो लाग्यो ?
– यसमा चै रक नै भएर पुरा योङ्ग मानिसहरुले चै रुचायो र धेरै मान्छेले चै मन पराएन किन भने एउटा केटी मान्छेले चिच्याउँदा उनीहरुलाई मन परेन।
अहिले सम्म तपाइले कति गीतहरु गाउनु भो ?
– त्यसमा के इम्पोटेन्ट छ कति वटा गीत गायो भने चै के हुन्छ ? संख्याले होइन क्वालिटीले गर्छ। तपाइले एल्बमबाट हेर्नु भो भने चै पचास वटा गीत गाएको छु। तपाइले अब स्टेज पर्फर्मेन्स भन्नु भो भने चै अटलिस्ट दशहजार वटा गीत गाइ सके होला।
नेपालको कुनकुन ठाउँमा तपाइले गएर रक स्टायलको पर्फमेन्स दि सक्नु भाछ ?
– धरान, इटहरी, उर्लाबारी, बाग्लुंग, मनाङ नेपाल त सबै घुमी सकेका छौ।
अन्तराष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा खेरी चै कुन कुन देश जानु भाछ ?
-युके, सिंगापुर, सिंगापुरमा नेपालीले बोलाएर गएको छैनौ सिंगपुरेले नै बोलाएर गएको हो भेरी प्रोउड अफ दयाट त्यहाँ हामीले नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्यौ र इन्डियामा पनि हामीले नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्छौ।
स्टेज प्रोग्रामको कुनै त्यस्तो रोचक प्रसंग छ ?
– धेरै छ कुन चै भन्नु सबै नै राम्रो रोचक नै छ।
अहिले सम्मको तपाइको गीत मध्ये आफुलाई मिठो लाग्ने कुन गीत हो ?
-तपाइले सुन्नु भा छैन होला मानिसहरुले पनि सुन्नु भा छैन यो हाम्रो फोर्त एल्बममा छ त्यो हो नगरन।
अहिले के मा बिजी हुनुहुन्छ ?
– अहिले वीमन एण्ड कन्सर्ट भन्ने योंगर गर्ल अथवा केटीहरुको लागि इन्करेजमेन्ट र इम्पवरमेन्ट गर्न र नेपाल टुर गर्न खोजि राछौ यसैमा बिजी छु।
अहिले सम्म तपाई आफ्नो प्रोफेसनबाट कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ?
– सबै भन्दा धेरै सन्तुष्टि छु।
परिवारले साथ दिनु भाछ ?
– दिनु भाछ र त अहिले सम्म गरिराछु तर यो हामी वुमनलाइ मात्र किन सोध्नु हुन्छ ?
यहाँलाई आनन्द को समय गोधुली साँझ वा बिहानको उसा कुन मन पर्छ ?
– मलाइ बेलुकीको गोधुली साँझ नै मन पर्छ।
तपाइलाई लाग्ने सबै भन्दा मिठो खाने कुरा ?
– तपाई खानु हुन्छ किनेमा ? हो तै भात र किनेमा मन पर्छ।
आर यु म्यारिड ?
– एस आइ एम भेरी मच म्यारिड
लव म्यारिज हो कि अरेन्ज हो ?
– लव म्यारिज
कति बर्षको लव ?
– एक बर्ष
यो ब्याण्ड चलाउन चै अलि गारो गारै पर्छ होला हैन ?
– ब्याण्ड चलाउन सजिलो हो त्यस्तो गारो छैन।
हाम्रो दर्शक श्रोतालाइ तपाइको ब्याण्डको नाम भनिदिनु न ?
– अभय एण्ड द स्टिम इन्जिनस
यो नाममा केहि रहस्य छ ?
-धेरैनै छ स्टिम इन्जिनसमा चै पहिला इण्डस्ट्रिज रेभुलुसन सुरु हुँदा सब रेभुलुसन सुरु भाको हो फ्याक्ट्री देखि सबै टेक्नोलोजी सुरु भाको स्टिम इन्जिनस देखि सो या ।
त्यहि भएर तपाइले नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा रेभुलुसन ल्याउन चाहनु भाको हो ?
– चाहेको त छुइन भैराछ जस्तो लाग्छ।
तपाइको एल्बमहरु हाम्रो दर्शक श्रोतालाइ बताई दिनुहोस् न खोजेर सुन्न सहयोग पुगोस ?
– हाम्रो एल्बमहरु चार वटा छ पहिलो अभय एण्ड द स्टिम इन्जिनस, दोस्रो नयन, तेस्रो ट्रउ सोल र फोर्थ एल्बम हो लुकिङ फर लव।
अन्त्यमा हाम्रो दर्शक श्रोतालाइ के भन्न चाहनु हुन्छ ?
– हाम्रो म्युजिक सुनी राखिदिनुहोस, हामीलाई कन्सर्टहरुमा बोलाइ राख्नुहोस, हामीलाई रेलिभेण्ट हुन दिनुहोस बस तेतिनै।